पोखरीको डिलमा १० लाख १० हजार नगद भेटियो, कहाँबाट आयो यति धेरै पैसा? – PathivaraOnline
Home > समाचार > पोखरीको डिलमा १० लाख १० हजार नगद भेटियो, कहाँबाट आयो यति धेरै पैसा?
पोखरीको डिलमा १० लाख १० हजार नगद भेटियो, कहाँबाट आयो यति धेरै पैसा?
admin May 21, 2020 समाचार, समाज	0
रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकाको परोहा डुमरीयास्थित पोखरीको डिलमा छरिएको अवस्थामा प्रहरीले १० लाख १० हजार रुपैयाँ बरामद गरेको छ ।
डुमरीया माइस्थान चोक सँगै रहेको पोखरी छेउमा दुई जना व्यक्तिहरु प्रहरीलाई देखेर भागेको र सो स्थानमा पैसा छरिएको अवस्थामा फेला परेको ईशनाथ नगरपालिकाका मेयर सन्तोष मेहताले बताए ।
ना ५४ प २११६ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार दुई जनालाई ईशनाथ नगरपालिका कार्यालय अगाडि गस्तीमा रहेको प्रहरीले रोक्न खोजेको थियो । तर उनीहरु रोकिएनन् । प्रहरीले पछयाउन थालेपछि डुमरीया माइस्थान चोक सँगै रहेको पोखरीको छेउँमा उनीहरु मोटरसाइकल छोडेर भागेका थिए ।
त्यहाँबाट बरामद रकम औरैयाका प्रहरी सहायक निरीक्षक ललित कुमार साहले नगर प्रमुखको घरमा लगेर रोहबरमा गन्न लगाएका थियो । रकम गन्दा १० लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको पाइएको मेयर मेहताले बताए ।
बरामद भएको रकम र मोटरसाइकल प्रहरी चौकी औरैयामा राखिएको छ । फरार भएका व्यक्तिहरुको पहिचान हुन सकेको छैन ।
भारतसँग सीमा जोडिएको रौतहटका औरैयाबाट ठूलो परिमाणको रकम बरामद हुनुले यो क्षेत्रमा हुण्डी कारोबार मौलाएको संकेत मिलेको स्थानीय बताउँछन् । बरामद भएको रकमबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका उच्च अधिकारीहरु सम्पर्कमा आउन चाहेका छैनन् ।